John C. Munro Hamilton International Airport dia mandray ny filoha vaovao sy ny tale jeneraly
Home » Vaovao momba ny fiaramanidina » John C. Munro Hamilton International Airport dia mandray ny filoha vaovao sy ny tale jeneraly
Ny biraon'ny seranam-piaramanidina iraisam-pirenenan'i John C. Munro Hamilton, TradePort International Corporation, dia nanambara ny fanendrena an'i Cathie Puckering ho filoham-pirenena sy talen'ny mpanatanteraka ao amin'ny seranam-piaramanidina. Nandritra izay dimy volana lasa izay, tamin'ny andraikiny maha filoha mpisolo toerana & CEO, Puckering dia nitarika an'i Hamilton International tamin'ny vanim-potoana nitomboana be ary nandroso tamin'ny fandaminana stratejika, nametraka làlana vaovao ho an'ny fikambanana.
Miakatra amin'ny fiakarana mafy ny seranam-piaramanidina, ny fepetra ilaina amin'ny filoham-pirenena sy ny CEO dia misy ny traikefa amin'ny indostria, ny fahatakarana ny asan'ny seranam-piaramanidina, ary ny vina stratejika amin'ny fampitomboana ny seranam-piaramanidina ho vavahady manerantany ho an'ny dia mora vidy mankany sy avy any atsimon'i Ontario.
"Mitondra fifangaroana traikefa, fahaiza-manao ary soatoavina natambatra 20 taona mahery tao amin'ny Hamilton International i Cathie," hoy i Ron Foxcroft, filohan'ny TradePort International. "Ny fomba fitarihana fiaraha-miasa, ny fahaizan'ny indostria ary ny fifandraisana misy eo amin'ny fiarahamonina dia nahatonga azy hanana andraikitra lehibe."
Mpanatanteraka eo amin'ny seranam-piaramanidina efa za-draharaha, Puckering dia nitana andraikitra ambony hatrany tao amin'ny Hamilton International. Izy dia nandresy ny rafitra sy rafitra vaovao, ao anatin'izany ny maodely ara-bola sy ny fandrefesana ny fahombiazana mba hanatsarana ny valin'ny Seranam-piaramanidina sy ny tambajotra Vantage midadasika. Ny halalin'ny traikefany sy ny toetrany amin'ny fitarihana dia hametraka an'i Hamilton International ho an'ny fitomboana mitohy.
"Manantena ny hitarika ny ekipa miavaka ao amin'ny Hamilton International aho," hoy i Cathie Puckering, filoha & CEO ao amin'ny seranam-piaramanidina iraisampirenena Hamilton. "Ny fifantohako dia ny fampitomboana ny Hamilton International ho vavahady manerantany ho an'ny fivezivezena sy fivezivezena mora vidy any Canada, ary manohy miasa seranam-piaramanidina azo antoka, mahomby sy mifandray tsara ho an'ny vondrom-piarahamoninay sy ireo orinasa sy mpandeha izay arosonay."
Hamilton International dia nandray ny mpandeha 599,146 tamin'ny 2017, fiakarana 80% raha oharina amin'ny taona 2016. Toy izany koa, fitomboana 14% tsy tapaka izay hita tamin'ny taona 2017 ho an'ny orinasam-pitaterana entana sarobidy ao amin'ny Airport. Amin'ny fijerena ny ho avy, Puckering dia hanohy hamolavola sy hanatsara ny lazan'i Hamilton International ho seranam-piaramanidina haingana indrindra any Canada.